एनआरएन अमेरिकाका Board of Director का उमेदवार विजय ज्ञवाली को हुन्? एनआरएन अमेरिकाका Board of Director का उमेदवार विजय ज्ञवाली को हुन्?
वि.सं २०४५ सालमा बुवा प्राध्यापक डा. हिरण्यलाल ज्ञवाली र आमा सिता ज्ञवालीको कोखबाट गुल्मीको थोर्गामा जन्मेका विजय ज्ञवाली एक जुझारु, शिक्षित र नेतृत्व क्षमतामा अब्बल युवा हुन्। १७ बर्षको उमेरमै २०६२/६३ को दोश्रो जनआन्दोलनमा सकृय भूमिका निभाएका ज्ञवाली वि.सं. २०६५ सालमा मीनभवन क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनले ब्यवस्थापनमा स्नातक र टुरिजममा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने आईटी र पत्रकारितामा विशेष रुचि राख्छन्। उनीसंग कलिलो उमेरमै काठमाण्डौ , बुटवल र चितवनमा राईज एजुकेशनको संस्थापक निर्देशक भएर काम गरेको अनुभव छ।
सन् २०१७ मा अमेरिका आएका विजय न्युयोर्कमा रही राईज ग्लोबल ईन्कका सिईओ तथा रियल स्टेट र ईन्सुरेन्स एजेन्टका रुपमा कार्यरत छन्। अमेरिकाका विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा सक्रिय भै योगदान गरेका विजयले गत बर्षको कोभिड महामारीमा नेपाली समुदायलाई उल्लेख्य सहयोग गरेका थिए भने कोभिडबाट मृत्यु भएका स्वर्गीय पवन मल्लका छोरीहरुका लागि आर्थिक सहयोग संकलन अभियानको नेतृत्व गरेका थिए। त्यसैगरी नेपालमा लक डाउनबाट खान नपाएकाहरुका लागि संचालन गरेको तातो खाना अभियानलाई सहयोग गर्न रक़म संकलनको नेतृत्व गरेका थिए। उनी हाल एनआरएन युथ कोअर्डिनेसन कमिटीका सदस्य छन्।
एनआरएनप्रति आम युवाहरुको चासो नहुनुमा यसका नेतृत्वकर्तामा भएको दूरदर्शितामा कमी भएको र दलीय राजनीतिको अर्को रुप देखिएको उनी बताउँछन्। नेपालको राजनीतिकै शैलीमा काम गरिने भएकोले प्रवासी नेपालीको एक मात्र आधिकारिक संस्था भएर पनि सदस्य बन्नका लागि हात जोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आफूले उमेदवारी दिएको उनी बताउँछन्। नेपालीहरु वीच कुनै दलगत, जातिगत र क्षेत्रीय सम्बन्धभन्दा नितान्त फरक र गर्व गर्न सकिने सम्बन्धको बिकास गर्नैपर्ने उनको ज़ोड छ। युवासहितको एनआरएनए र मातृभूमि र कर्मभूमिको सम्बन्धलाई अझ घनिभूत बनाउँदै प्रवासी नेपालीहरुको अधिकारलाई दुबैतर्फ मजबुत बनाई सबैको साझा संस्था बनाउन पहल गर्ने उनको प्रतिज्ञा रहेको छ। उनले राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको सन २०२१-२०२३ कार्यकालको लागि वोर्ड अफ डाईरेक्टर पदमा उमेदवारी दिएका छन्। सबै तह र बिचार समूहसंग मित्रवत् ब्यवहार राख्ने सहयोगी र सहृदयी विजयलाई हाम्रो पनि विजयी भव: को शुभकामना छ।
नेता बन्न होईन कार्यकता बन्न मेरो सचीव पदमा उम्मेद्धारी हो : द्रोण गौतम